Remote working စနစ်အတွက် ဝန်ထမ်းများရဲ့ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဘယ်လိုစီမံကြမလဲ? - JustLogin
Remote working စနစ်အတွက် ဝန်ထမ်းများရဲ့ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဘယ်လိုစီမံကြမလဲ?
COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် လုပ်ငန်းများအနေနဲ့ အဆင်သင့် ဖြစ်သည် ဖြစ်စေ၊ မဖြစ်သည်ဖြစ်စေ Remote Working စနစ်ဟာ အရေးပေါ် ကူးပြောင်းရမယ့် လုပ်ငန်းစနစ်တစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။ Twitter နှင့် Square တို့ကဲ့သို့ကုမ္ပဏီကြီးများအနေနဲ့လည်း အကန့်အသတ်ကာလမရှိသော Remote Working စီမံချက်များကို ကြေကြာခဲ့ပြီး အလားတူကုမ္ပဏီများစွာလည်း ရှိပါသေးတယ်။ သမိုင်းတစ်လျှောက်ပြန်လည်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်​တော့ မန်နေဂျာများဟာ ဝန်ထမ်းများရဲ့ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်များကို ရုံးတွင်းမှာသာ စစ်ဆေးခဲ့လေ့ရှိပါတယ်။ သို့သော်လည်း ယခုကာလမှာတော့ ဝန်ထမ်းများရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို Remote working စနစ်မှာ စစ်ဆေးဖို့ အနည်းငယ်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဖွဲ့အစည်းများအနေနဲ့ ယခုအချိန်ဟာ၎င်းတို့ရဲ့ Remote Working team ကို စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ချက်တွေကို ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ်တဲ့ အချိန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် New Normal တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့ Remote working စီမံမှုများကို ကုမ္ပဏီများအနေနဲ့ ဘယ်လိုထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတာကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ ဝန်ထမ်းများကို ပုံမှန်ဆက်သွယ်ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်အနေအထားများကို ဆန်းစစ်ပါ။
ခုလို မရေရာ မသေချာသော ကာလတစ်ခုမှာ ဝန်ထမ်းများနှင့် ပုံမှန်ထိတွေ့ဆက်သွယ်ပေးခြင်းဟာ အင်မတန်မှ အရေးပါတဲ့ အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့လည်း ပုံမှန်ရုံးသို့လာရောက်ခွင့်မရဘဲ အိမ်မှသာ လုပ်ငန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာဖြစ်လို့ တစ်ခါတစ်ရံမှာ သီးခြားလို ခံစားရပြီး အထီကျန်ခြင်းကိုပါ ခံစားရစေနိုင်တာကြောင့် ဝန်ထမ်းများကို Online မှ တစ်ဆင့် ထိတွေ့ဆက်သွယ်ပေးဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ကုမ္ပဏီများအနေနဲ့ Remote working ကို စီမံရာမှာ နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ အထိရောက်ဆုံးနည်းတစ်ခုကတော့ မန်နေဂျာများအနေနဲ့ နေ့စဉ် ၁၅ မိနစ်တာ အစည်းအဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ပြီး အောက်ပါမေးခွန်းများကို မေးမြန်းကာ ၎င်းတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆန်းစစ်ပြီး လိုအပ်ပါက တည့်မတ်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
မနေ့က ဘာတွေ လုပ်ဖြစ်ခဲ့သလဲ?
ဒီနေ့ရော ဘာတွေ လုပ်ဖို့ရှိသလဲ?
မိမိတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေတဲ့ အခက်အခဲ အချို့ ဘာဖြစ်မလဲ?
စတာတွေကို အစည်းအဝေးတွေမှာ မေးမြန်းသင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လိုအပ်ပါက မန်နေဂျာများအနေနဲ့ ဝန်ထမ်းများကို နေ့စဉ်စစ်ဆေးပေးတဲ့ အပြင် တစ်ဦးချင်းစီကိုလည်း ဆက်သွယ်ပြီး Feedback ပုံမှန်ပေးခြင်းဖြင့် ဝန်ထမ်းများရဲ့
ဒီလိုဆောင်ရွက်ချက်များက Remote working ကို ထိရောက်အေင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် အလေ့အကျင့်ကောင်းတစ်ခုဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ အချိန်နှင့်တပြေးညီ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး နည်းနာများ
Remote working ရဲ့စိန်ခေါ်မှုများထဲက တစ်ခုကတော့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိခြင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယခုလိုကာလမျိုးမှာ time tracking and collaboration tools များက အင်မတန်မှ အသုံးဝင်လှပါတယ်။ အချို့သော ဝန်ထမ်းများအတွက် Remote working ကို အသားမကျလှသေးတာကြောင့် ဝန်ထမ်းများရဲ့ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် ပုံမှန်ကောင်းမွန်စေဖိုအတွက် သင့်လျော်မှန်ကန်တဲ့ Tools များကို ရွေးချယ်ထားမှသာ ဝန်ထမ်းများရဲ့ တာဝန်ယူနိုင်မှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များကို ပူပန်စေဖို့ မလိုဘဲ စီမံနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
JustLogin မှာဆိုရင်​တော့ time tracking and collaboration tools များ ဖြစ်တဲ့ Hubstaff’s employee monitoring software ကို ဖိလစ်ပိုင်နှင့် မလေးရှားနိုင်ငံတို့မှာ ကမ္ဘာ့ locakdown ကာလမတိုင်ခင်တည်းက စမ်းသပ်အသုံးပြုခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ software ဟာဝန်ထမ်းများရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ စစ်ဆေးပေးတာဖြစ်လို့ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ တာဝန်ယူနိုင်မှုကို ကူညီပေးတာကြောင့် အင်မတန်မှ ကောင်းမွန်အသုံးဝင်ပါတယ်။ ၎င်း software ကို Mobile ဖုန်းမှတစ်ဆင့်လည်း login ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့ရဲ့ Screen ကို random screenshots ပြုလုပ်နိုင်ပြီး click တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် အသေးစိတ် report ကိုပါ ရရှိနိုင်ပါသေးတယ်။
ဒါ့အပြင် In-house application ဖြစ်တဲ့ JustClock ဟာ နေရတာအတိအကျကို မြေပုံမှတစ်ဆင့်မှတ်သားထားပေးတာကြောင့် ဝန်ထမ်းများရဲ့ တည်ရှိနေရာကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ AI မှတစ်ဆင့် မျက်နှာများကို မှတ်သားပေးထားပြီး geofencing facility က virtual boundary တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးထားတာကြောင့် ဝန်ထမ်းများကို ၎င်းတို့ရဲ့ အလုပ်များကို အာရုံစူးစိုက်စေဖို့ ကူညီပေးရုံသာမက အိမ်မှာနေစဉ် အလုပ်ချိန်အတွင်းအပိုအချိန်ဖြုန်းခြင်းတို့မှလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
၃။ ရှင်းလင်းပြတ်သားသော ပန်းတိုင်များနှင့် အချိန်စာရင်းများကို လမ်းညွှန်ကြီးကြပ်ပေးပါ။
ကျွနိုပ်တို့ အမြဲပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ “လုပ်ငန်းပြီးမြောက်မှုဖြင့်သာ တိုင်းတာသည် “ ဆိုသော စကားအတိုင်း ကုမ္ပဏီရဲ့ အောင်မြင်မှုအတွက် အလုပ်ပြီးမြောက်စေဖို့ ဝန်ထမ်းများအတွက် ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ ပန်းတိုင်များ၊ အချိန်စာရင်းများကို ချမှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မန်နေဂျာများအနေနဲ့ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ရော အသင်းသားများအတွက်ပါ ရည်မှန်းချက်ပန်တိုင်များကို နေ့စဉ် ချမှတ်ပြီး တာဝန်ယူမှုအပြည့်နှင့် တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ အရေးကြီးလှတာကြောင့် SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timely) နည်းဥပဒေသကို အသုံးချဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အထက်ပါ SMART ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိစေဖို့အတွက် Synergita’s SMART Goal Management ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့်လုပ်ငန်းတွင်းစွမ်းဆောင်ရည်များကို ခြေရာခံစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ Synergita’s Continuous Engagement Platform (CEP) ဟာ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် ဆောင်ရွက်မှုအနေအထားကို အဆက်အပြတ်ပံ့ပိုးကူညီပေးနိုင်ပြီး အသင်းအဖွဲ့အတွင်း အလုပ်ပြီးမြောက်မှု၊ သင်ယူနိုင်စွမ်းနှင့် တိုးတက်မှုကို အလေးပေးတာကြောင့် ကုမ္ပဏီတွင်း category အသစ်အနေနဲ့ အချင်းချင်း အားပေးချီးမြှောက်ခြင်း ၊ အသိအမှတ်ပြုခြင်းတို့ ကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Synergita’s Continuous Engagement Platform (CEP) မှာ ဂိမ်း ကဲ့သို့ ပျော်စရာကောင်းသော အစီအစဉ်အဖြစ် ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ လုပ်ငန်းအပေါ် တန်ဖိုးထားမှုများနှင့်လည်း အကဲဖြတ်နိုင်ပါသေးတယ်။
COVID-19 ကာလဟာ ကုမ္ပဏီများအတွက် Remote working ကို ပြောင်းလဲပြီး ဝန်ထမ်းများရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်များကို တိုးမြှင့်ပေးဖို့ နည်းလမ်းသစ်များကို ရှာဖွေရတဲ့ အချိန်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နည်းပညာများကို အသုံးချပြီး ဝန်ထမ်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကာ အနာဂတ်ကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ရမယ့် အချိန်ဖြစ်တာကြောင့် JustLogin ရဲ့ အကြံပြုချက်များအတိုင်း ထိရောက်တဲ့ Tools များကို ရွေးချယ်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ အနာဂတ်အတွက် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်များကို ထိရောက်စွာ စီမံနိုင်မယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါကြောင်း အကြံပြုရင်းနိဂုံချုပ်လိုက်ပါတယ်။
Uncategorized @my ဒီဇင်ဘာ 15, 2020
သင်လုပ်ငန်းကို ဒီဂျစ်တယ်စနစ်နဲ့ အသားတကျဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲ
Uncategorized @my ဇူလိုင် 6, 2020
လုပ်ငန်းကုန်ကျစားရိတ်များကို အဝေးမှ စီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြင့် ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူးများ